Izindaba - Ungayikhetha kanjani i-stroller?
Ungayikhetha kanjani i-stroller?
Usayizi wenqola yengane yinto yokuqala okufanele ibhekwe. Uma incane kakhulu, nakanjani ayinakwenzeka, ngoba izingane zikhula ngokushesha okukhulu ebuntwaneni, Uma isithombe sikulungele, uqala ukuthenga i-pram encane. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, uzothola ukuthi ngokukhula kwengane, kuba okungafanelekile, futhi kufanele uthenge entsha. Vele, inkinga yosayizi ifaka nosayizi ngemuva kokugoqwa. Uma ukhipha ingane, uzofaka inqwaba esiqwini. Kuphela uma usayizi uncane ngokwanele ngemuva kokugoqwa, lapho ungayisebenzisa khona Kulula.
Isisindo se-pram naso siyisici okufanele sicatshangelwe. Kwesinye isikhathi kufanele uphathe ingane, njengalapho wehlela ezansi noma ezindaweni eziminyene, uzobona ukuthi kuwukuhlakanipha kangakanani ukuthenga isitiloli esihamba kancane.
Ezinye izinqola zezingane zingashintsha isakhiwo sangaphakathi, njengokuhlala noma ukuqamba amanga. Lapho ilele phansi, ikalishi lomntwana limbozwe ngenetha elincane lomiyane. Uma kwenziwa, kune-tablet phambi kwengane, efana netafula elincane, ukuze ukwazi ukubeka ibhodlela njalonjalo.
Amanye amakalishi ezingane aklanywe ngokufanelekile. Isibonelo, kunemiklamo eminingi eyenziwe ngezifiso. Kunezindawo lapho kungafakwa khona izikhwama, nezindawo zezinto ezibalulekile zengane, njengamabhodlela obisi nephepha langasese. Uma kunemiklamo enjalo, kuzoba lula kakhulu ukuphuma.
Lapho ukhetha isitiloli, kufanele futhi ubheke nenani lamasondo, okubalulekile kwesondo, ububanzi besondo, nokusebenza kokujika kwemoto, nokuthi ngabe kulula ukusebenza kalula.
Ngoba isikhumba sengane sibucayi, kufanele ubheke ingaphandle lemoto namaphethelo ahlukahlukene namakhona lapho ukhetha ikalishi lomntwana. Kufanele ukhethe indawo ebushelelezi futhi ebushelelezi, futhi ungabi namaphethelo amakhulu nobuso bemoto obungabushelelezi, ukuze ugweme ukulimaza isikhumba esibucayi sengane.